Malite oru ngo na Git na Google Code (Akụkụ II) | Site na Linux
Malite oru ngo na Git na Google Code (Akụkụ nke Abụọ)
Dị ka nkwa bụ ụgwọ, lee, anyị ga-agbaso usoro ndị dị mkpa iji mepụta ọrụ na Koodu Google.
1 1. Anyị na-abanye Google
2 2. Anyị na-emepụta Project ahụ
3 3. Inweta data nchekwa na Usoro Google
4 N'oge na-adịghị
1. Anyị na-abanye Google
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịbanye na akaụntụ anyị Google, anyị na-abanye na saịtị nke Koodu Google na n'elu aka nri aka nri anyị ga-ahụ ụzọ nbanye. Na ekpe anyị nwere ike ịgbanwe asụsụ.
2. Anyị na-emepụta Project ahụ
Ozugbo ịbanye na saịtị ahụ na akaụntụ anyị, anyị nwere ike ịchọpụta nke a n'ihi na n'akụkụ aka nri elu anyị ga-ahụ adreesị ozi-e nke anyị Google, na anyị nwere ike pịa njikọ nke kwuru Mepụta oru ohuru. Nke a ga - emegharị anyị ihu na peeji iji mezue nkọwapụta ọrụ anyị.
Anyị mezue data nke ọrụ anyị ma ozugbo anyị gwụ, anyị ga-pịa bọtịnụ ahụ Mepụta Project.
Ugbu a anyị kere ọrụ anyị, ọ na-egosi anyị isi peeji ya. Maka ugbu a, anyị agaghị eme ọtụtụ ihe karịa Koodu Google. Ọ na-anọgide anyị ka anyị nweta ihe ọmụma na-enwe ike jikọọ mgbe e mesịrị remotely na bulite faịlụ site Git.
3. Inweta data nchekwa na Usoro Google
Maka nke ahụ, anyị ga-aga ngalaba ahụ Source (isi iyi koodu) ma ọ ga - enye anyị nhọrọ 2 iji jikọọ.
La Nhọrọ 1 ga-ajụ anyị maka paswọọdụ googlecode.com oge ọ bụla anyị chọrọ ime ụfọdụ Kwaa, ihe na-emesị bụrụ ihe na-agwụ ike. Karịsịa ebe ọ bụ na okwuntughe a bụ nke ejiri aka ya rụọ ọrụ na-akpaghị aka, ọ bụghị paswọọdụ anyị maka akaụntụ anyị. Ọ bụ ya mere m ji kwado iji ya Nhọrọ 2.
Anyị ga-eji nhọrọ 2, anyị pịa njikọ na-ekwu googlecode.com paswọọdụ. Nke a ga-egosi anyị ihu akwụkwọ ọhụụ ma site ebe ahụ anyị ga - edepụta akara ikpeazụ nke ngalaba nke mbụ. Nke anyị na-ahụ pụta ìhè na foto na-esonụ.
Echegbula onwe gị, paswọọdụ a ị hụrụ m emeela ya ọzọ na ọ baghị uru maka ihe ọ bụla
Anyị mepụtara faịlụ na ỤLỌ nke onye ọrụ anyị na-akpọ .netrc n'ime anyị na-etinye ọdịnaya nke anyị depụtaghachiri na ibe ahụ. N'okwu a:
Ruo ugbu a anyị kere ọrụ ahụ n'ime Koodu Google na anyị nwere njikere faịlụ na anyị «ga-jikọọ»Na ebe nchekwa anyị dịpụrụ adịpụ ozugbo anyị debere ebe nchekwa mpaghara anyị Git.
Na akụkụ ọzọ anyị ga-ahụ otu esi emepụta ọrụ na igwe anyị ma hazie Git maka njikwa njikwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Malite oru ngo na Git na Google Code (Akụkụ nke Abụọ)
Yakuake mgbe niile na ihuenyo zuru (Ọnọdụ ihuenyo zuru oke)
Desktọpụ Linux kacha mma: Disemba 2013 - Nsonaazụ